Faransiiska ayaa soo saaray sharciyo socdaal oo cusub oo loogu talagalay booqdayaasha Ingiriiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » Faransiiska ayaa soo saaray sharciyo socdaal oo cusub oo loogu talagalay booqdayaasha Ingiriiska
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Faransiiska ayaa fududeynaya xannibaadaha coronavirus ee la soo saaray Diseembar 18, si wax ku ool ah u xaddidaya dhammaan safarka aan muhiimka ahayn ee u dhexeeya labada waddan iyada oo laga baqayo faafitaanka kala duwanaanshaha Omicron.
Soo-booqdayaasha la tallaalay ee ka safraya Boqortooyada Ingiriiska France uma baahna inay bixiso sabab macquul ah oo lagu galo dalka ama karantiil marka ay yimaadaan.
Sida laga soo xigtay wasiirka dalxiiska ee Faransiiska Jean-Baptiste Lemoyne, natiijo xun oo COVID-19 ah ayaa la qaaday 24 saacadood ka hor inta uusan dhoofin. Boqortooyada Ingiriiska wali waa loo baahan doonaa.
Socdaal aan la tallaalin oo ka socda UK si kastaba ha ahaatee waxaa weli looga baahan doonaa inay caddeeyaan safarkooda inuu yahay lama huraan iyo gooni-gooni muddo 10 maalmood ah.
Faransiiska ayaa fududeynaya xannibaadaha coronavirus ee la soo saaray Diseembar 18, si wax ku ool ah u xaddidaya dhammaan safarka aan muhiimka ahayn ee u dhexeeya labada waddan iyada oo laga baqayo faafitaanka cudurka. omicron duwanaansho.
Ogolaanshaha soo gelida booqdayaasha ka yimid Boqortooyada Ingiriiska waxay wax weyn ka tari doontaa qaybta dalxiiska ee Faransiiska inta lagu jiro xilliga Fasaxa dugsiyada UK ee Febraayo.
Isaga oo ka hadlaya xukunka, madaxa fulinta ee Brittany Ferries Christophe Mathieu ayaa ugu yeedhay "nafis weyn" wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in xeerarkii hore ay matalaan "xiritaankii xadka ee ugu dambeeyay ee dhibaatada COVID-19."
Nasashada xayiraadaha ayaa timid in kasta oo Faransiiska laftiisa uu diiwaangeliyay tiro rikoor ah oo ah infekshanno maalinle ah Arbacadii, iyadoo 338,858 xaaladood oo cusub la xaqiijiyay, sida ay sheegtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).
Baarlamaanka Faransiiska ayaa hadda ku guda jira geeddi-socod uu ku soo bandhigayo kaarka COVID-19 kaas oo si wax ku ool ah uga mamnuuci kara dadka aan la tallaalin nolosha guud. Tani waxay dhalisay mudaaharaadyo heer qaran ah oo baahsan dabayaaqadii isbuucii hore kaasoo arkay in ka badan 100,000 oo qof ayaa u soo baxay inay ka soo horjeestaan ​​tallaabooyinka cusub. Hindise-sharciyeedkan ayaa waxaa soo maray aqalka hoose, waana in hadda uu taageero ka helaa golaha guurtida ka hor inta uusan si rasmi ah u dhaqan gelin.